Sahaminta Guriyeynta Lagu Heli Karo
Muuqaalkan asalkiisu wuxuu asal ahaan kasoo muuqday Edge, oo ah majaladda internetka ee Xafiiska Horumarinta iyo Horumarinta Magaalooyinka ee Horumarinta Siyaasadda iyo Cilmi-baarista Maraykanka.
Minneapolis 'Clare Midtown, oo qaata abaalmarinta AIA MN / McKnight Award Mashruuca Guri Lacagta ah
Ugu dambeyntii, Machadka McKnight wuxuu siinayaa tixgelin dheeraad ah oo ku saabsan jihaynta suuqyada iyo miisaaniyadda macnaheedu yahay barnaamijyadayada, siyaasadaha, iyo habka waxqabadka. Qayb ahaan tani waa waxqabadka la qabsashada ee Hantida weyn, hoos u dhigista khayraadka, caqabadaha heerarka federaalka, iyo joogtaynta isbeddellada dhibta. Qaar badan oo ka mid ah wada-hawlgalayaasha horumarinta ee kuyaal guryaha la awoodi karo waxay ka warqabaan jihada suuqa, sababtoo ah waa inay ka shaqeeyaan suuqa si ay u soo jiito kheyraadka dhismaha iyo baxnaaninta; Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah nidaamyada maalgelinta ee guryaha la awoodi karo waxay si aad ah ugu tiirsan yihiin kabitaanada, horumariyayaashan looma dhiirigelin inay sameynta jaangooyooyinka suuqooda mudnaanta leh. Diirada saaridda guryaha cusub ee la awoodi karo waxay buuxinayaan "farqiga" suuqa oo u dhexeeya qarashka guud ee horumarinta iyo waxa laga maalgelin karo dakhliga soo gala netka. Si kastaba ha ahaatee, waxaan uga mahad celinaynaa qayb weyn oo ku taal Minnesota si fiican loo horumariyo oo gurigana leh, laakiin waxaan bilaabeynaa inaan isweydiino su'aalo adag oo ku saabsan kharashka gurmadka ee guryo la awoodi karo (arag MN Challenge) iyo haddii ay jiraan waxyaabo kale oo u baahan wax yar ama kabadan. Waxaan dooneynay inaan ogaano haddii horumariye bulsho dhiirigelin leh uu iibsan karo guryo aan la dabooli karin oo uu abuuro guryo rasmi ah oo la awoodi karo oo leh wax yar ama kabadan.
Gaaritaanka Xaddidan ee Guryeynta La-Kordhiyo
Sanadkii 2013 McKnight wuxuu ku wargeliyay warbixinta cinwaankeedu yahay Cadaadiska Guryaha la Gadan Karo: Miyuu "Hawlaha ugu Fiican" Habboon? Waxay tilmaamaysaa in tirada guud ee guryaha la awoodi karo ay ka abuurmeen 30-kii sanno ee la soo dhaafay ku dhowaad 110,000 oo ka mid ah gobolka oo ay ka mid yihiin 61,000 oo ka mid ah degaanka Minneapolis-St.Paul. Inkasta oo ay ku daraan waxyaabahan soo socda ee guryaha, boqolkiiba 50 dhammaan kiraysteyaasha degaanka caasimaddu waa culays qiimo leh, taasoo macnaheedu yahay in ay ku nool yihiin boqolkiiba 30 ka mid ah dakhligooda guriyeynta.
Bishii Juun 2013, Mashruuca Kaydinta Kaydinta ee Minnesota wuxuu soo saaray warbixinta cinwaankeedu yahay Meelaha u dhaxeeya oo darsaday dabeecadda hantida guryaha ee la awoodi karo ee ku yaala Minnesota iyo sidoo kale waxqabadyo suurtogal ah si loo ilaaliyo dhaqaalaha. Waxaa la ogaaday in ay jiraan qiyaastii 182,000 oo ah guryo aan la dabooli Karin ee suuqa gaarka ah oo ay awoodi karaan kuwa ka hooseeya 50 boqolkiiba dakhliga dhexe. Guryahaasi sidoo kale waxaa ka buuxsama kuwa dakhligoodu sarreeyo. Iyada oo heerarka boosaska bannaan ee aagga magaalooyinka hadda ay si joogto ah uga hooseeyaan 3 boqolkiiba iyada oo in ka badan 17,000 oo ka mid ah cutubyadan la iibiyay 2-dii sanno ee la soo dhaafay, santuukanku ma noqon karo mid muddo dheer la awoodi karo.
Sida ugu dhakhsaha badan nidaamka guryaha la awoodi karo ayaa abuuri kara unugyo badan, waxay u baahan yihiin wax soo saarka koritaanka. Qorshaha siyaasadda guriyeynta ee dhowaan Golaha Metropolitan wuxuu soo jeedinayaa in ka badan 265,000 qoysaska dakhliga yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee Minneapolis-St. Meelaha Booska Baaskiilku waa qiimaha guriyeynta. Hase yeeshee gobolka metro oo keliya qiyaastii 1,500 oo cusub ama la hayn karo oo la karsado ayaa la soo saaraa sannad kasta. Si loo abuuro cutubyadan celcelis ahaan kharashka dhismaha cusub ee metro waxay kudhisantahay $ 220,000 halkii cutub, qaybaha la cusbooneysiiyo waxay ku kacayaan celcelis ahaan $ 160,000 halkii cutub. Isla markaa waxaan ognahay in guryaha iyo kharashka gaadiidka ee la isu geeyay ay noqdaan kuwo aad u muhiim ah in la tixgeliyo marka la eego deganaanshaha guryaha. Xaqiiqooyinkaas waxay soo aruuriyaan su'aalo:
Miyuu dhismaha rukunka ku dhisan yahay mida ugu habboon ee lagu taageerayo qoysaska dakhligoodu yar yahay ee lagu gaaro isku filnaansho weyn?
Nidaamka guryaha la awoodi karo ma gaari karaa miisaan ku filan si loo daboolo baahida, gaar ahaan marka la eego isbedelka kheyraadka federaalka ah?
Meelaha guryaha la awoodi karo ma awoodaan inay ku yeeshaan xoogagga suuqyada waaweyn si ay u daboolaan baahida?
Ujeedada ah in la sii wado xeeladdan fikradeed ee McKnight ayaa codsaday shirkad gaar ah oo u qaabilsan arimaha khaaska ah si ay u bixiyaan macluumaadka macaamil ganacsi lacageed oo bilaash ah laga bilaabo 2006 ilaa 2013 si ay uga caawiyaan jawaabaha su'aalaheena. Xogtaas waxaa ku jiray macaamil ganacsi oo qiimaha iibka ah oo ah $ 1 milyan ama wax ka badan, ma boqolkiiba boqol boqolkiiba iibka guryaha, laakiin waxay bixisaa sawir aad u weyn oo macaamilo badan oo suuqa ku yaalla. Xogta ayaa shaaca ka qaaday in intii u dhaxaysay 2006 iyo 2013, 23 boqolkiiba oo ka mid ah guryaha kirada ah ee Minneapolis-St. Barta suuqa Paul ee guryaha ayaa isbeddelay celcelis ahaan 5,200 oo kirada ah oo lagu iibiyo sannadkii. Celceliska kharashka iibsiga waa $ 81,700 cutubkiiba. Hase yeeshee, macaamilada intooda badan (77 boqolkiiba) ayaa loogu talagalay guryaha fasalada B iyo C iyadoo qiimaha celcelis ahaan lagu saleeyo $ 70,000 halkii cutub.
McKnight ma isbarbar dhigi karo qarashka horumarinta guud sababtoo ah kharashka kaliya ee la helayo ayaa la heli karaa. Mid ka mid ah Roof Global Consulting ayaa markaa la weydiistay in uu ka shaqeeyo xaalado horumarineed oo tijaabiya mabda'a aasaasiga ah ee suuragal ah in la awoodi karo in laga saaro qayb ka mid ah macaamiilyadaas. Iibsashada unugyada la awoodi karo ee laga helo suuqa ayaa laga yaabaa inay suurtagal noqoto in la qabsado oo la abuuro guryo si joogto ah loo awoodi karo oo leh wax yar ama kabadan. McKnight wuxuu sahamin doonaa suurtogalnimada habkan oo la xidhiidha lamaanayaasha sanadaha soo socda. Tani "taabasho fudud"Caqabadaha horukaca kirada ah ee fikradaha ah ee dhaqaalaha guryaha la awoodi karo ee la taakuleeyay waxayna ku baaqeysaa dhaqdhaqaaqyo cusub oo dhaqdhaqaaq ah, oo ay ku jiraan isticmaalka dakhliga netka ah ee ka yimaada hantida kharashyada, dabacsanaanta si loogu adeego deganayaasha isku dhafan, helitaanka sinnaanta, maareynta hantida hufan, iyo shuruudaha la maamuli karo iyo shuruucda la raaci karo
McKnight iyo wada-hawlgalayaasha guriyeynta muhiimka ah waxay raadin doonaan "meel u dhaxaysa" guryaha la awoodi karo iyo kuwa aan la kiraysan karin. Sida aan u tixgelineynay in yareyno kheyraadka waqti ka dambeeya, korodhka luminta unugyada la awoodi karo, iyo sida jihada suuqyadu u siin karto fursado dheeraad ah iyo saameynta doorashada ayaa noqoto mid sii kordheysa.
Warbixinnada iyo tixraacyada maqaalkani waa badeecooyin badan oo ay ka mid yihiin Sanduuqa Guriyeynta Waddaniga ee Greater MN, Sanduuqa Guriyeynta Qoyska, HousingLink, Mashruuca Ilaalinta Guryaha, Hal Rag Global Consulting, National Housing Trust, CBRE Minneapolis Kooxo Guryeyn ah, iyo MN Housing.